China Blue High Ubushushu grease (HP) mveliso kunye nabenzi | Yi Xinyan
Ubushushu obuPhezulu obuBlue (HP)
Le mveliso yenziwe ngeoyile yamaminerali eqiniswe sisepha yentsimbi edityanisiweyo kwaye yacokiswa ngokusebenza okuphezulu koxinzelelo olukhulu kwiarhente yokunxiba, irusi yokulwa kunye ne-antioxidant.
Isantya esiphezulu kunye nezixhobo zomthwalo onzima
Ingxowa kunye nebhakethi kunye nesinyithi sinako kunye negubu
I-MSDS kunye neTECH
Ukuxhathisa kobushushu obuphezulu kakhulu, uxinzelelo olugqithisileyo lokunxiba, kuphucula kakhulu umthwalo wokuthwala igrisi Ukuthambisa okugqwesileyo okuphezulu, ukunciphisa ukungqubana komlinganiso, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla. Zombini ukumelana kwamanzi, ukutywina, uzinzo ngoomatshini, uzinzo lwe-oxidation. Ukolula ubomi bezixhobo, ukwandisa amandla okuphuma kunefuthe elibalulekileyo.
Ukungena kweCone 1 / 10mm
I-GB / T269
Indawo yokulahla ℃
Faka isicelo sokuthambisa izinto ezingxubayo ezinje nge-hub bearing, i-chassis, iimoto kunye nempompo yamanzi yeemoto zangaphandle nezasekhaya, iibhasi ezinkulu kunye neelori ezinomthwalo onzima phantsi kwesantya esiphezulu kunye nomthwalo onzima.
Ixesha lokusebenzisa ixesha: 80,000.00km ~ 100,000.00km
Izibonelelo eziKhulu zoKhuphiswano
· Umgangatho olungileyo
· Igama elihle
Yamkela uMyalelo wovavanyo omncinci
Ukupakisha uyilo lwaSimahla
· Isampuli iyafumaneka
Umsebenzi wophando kunye nophuhliso
Intsebenziswano yexesha elide
· Singaphezulu kweminyaka eli-10 yamava obuchule njengomenzi wegrisi yokuthambisa.
· Senza iphakheji njengoyilo lwakho okanye iisampulu zakho ngokupheleleyo.
· Sineqela elomeleleyo lophando kunye nelokuphuhlisa ukusombulula iingxaki zegrisi.
· Baninzi abathengisi bempahla eluhlaza kwimveliso yethu, sisebenzisene iminyaka emininzi.
Ii-odolo ezincinci zetyala zingamkelwa, isampulu yasimahla iyafumaneka.
Egqithileyo Uxinzelelo olugqithisileyo lweLithium Base Grease (EP)
Okulandelayo: Umsebenzi ophinyeneyo weCalcium
Elona xabiso ligciniweyo
Umzi mveliso we China Grease
Umvelisi we-China Grease
Umthengisi wase China weGrisi
Umgangatho ophezulu wokuthambisa ioyile
I-Polyurea Base Gcoba
Ukuqengqeleka Ukuthambisa iGrisi
Imoto eyahlukeneyo yeLithium esekwe kwiGrisi
Ukuthanjiswa okukhethekileyo ngomatshini wokucoca ulwelo
Ubushushu boPhezulu boMbane